ETO amin'ny VETCLINIC
Toerana Fitsaboana biby tokana eto Madagascar, VetClinic mandray anao 24/7.
Misy fiara fitaterana voatokana afaka maka sy manatitra ny biby marary.
Manolotra fizahana isan-karazany izay : ho an'ireo namandrika toerana, tsy misy famandriahan-toerana, ary fizahana vonjy maika ; ao ihany koa ny fizahana "pédiatrique" , "gériatrique" ary ny fizahan-toetra .
Izahay dia manao vaksin'ny biby arakaraki'ny sokajiny avy: ny taonany ny taonany, ny toe-batany ary ny toe-javatra iainany, Ny veterinera ato aminay dia hampahafantara anao ny dingana tsara indrindra tokony harahina amin’izany.
"PUCE ELECTRONIQUE" SY NY FIFINDRA-TOERANA
Betsaka isika no miakasa handefa na ampiditra ny bibitsika anatiny na ivelan'ny Madagascar ,misy manaraka na tsia,. Ary misy ny fitsipika sy lalàna tokony hajaina sy harahina. Off Huguette no mpiandraikitra manokana mikarakara izany, ary VetClinic no itokisan’ orinasam-pitaterana anabakabaka eto Madagascar fa mahavita ireo dingana rehetra arahina isanam-baratongany avy.
FANDIDIANA - FITSABOANA NIFY
Na fandidiana tsotra toy ny famorana, famotsiana nify, na fandidiana manokana (maso, taolana miaraka amin'ny fametahana palque, ..), dia mahazo mahatoky ianao fa ny fikarakarana tsara indrindra no omena ny bibinao.
Ho an'ny vonjy aina dia efa misy ireo ekipa afaka mandray 24/24.
Koa aza mangatak'andro intsony ary fa miandry anao izahay na antsoy ny sampana fiara misahana ny vonjy taitranay.
IAnananay avokoa ireo fanafody rehetra ilaina amin'ny fitsaboana biby .Afaranay avy any Frantsa sy Afrika Atsimo avokoa izy ireo mba ahazoana antoka ny hatsaran’ny kalitao.
Mba ahazoana mizaha haingana ny aretina mahazo, VetClinic dia manana laboratoara fitiliana manokana ho azy ary manana « radiographie » sy « echographie »ihany koa.
Manana fiara voatokana izahay afaka maka sy manatitra ny bibinao any an-trano. Ny mpamily dia nahazo fiofanana manokana momban’ny fitsaboana fototra ho entina hitaterana ny bibinao amin’ny fomba azo antoka indrindra.
VetClinic dia manana olona voahofana sy matihanina afaka manome fahafaham-po anao amin’ny izay fomba itiavanao ny hetim-bolon` ny alika na sakanao.
Marihina fa ilaina ny famandrian-toerana rehefa hanao izany.
Izahay ihany koa dia manana tolotra fampandroana natokana ho an’ireo izay tia mikojakoja ny alikany na ny sakany akaiky , afaka manantona na miantso avy hatrany ianao raha mila fanazavana fanampiny momba izany.
Anisany manamarika ny vetclinic ny fananany ireo marika tsara indrindra toy ny : Hill's, Royal Canin, Trainer, Rogz, …Koa aza misalasala ary mitsidika ny toerana misy anay mba ho fanomezana fahafaham-po ny bibinao.
RAHA HANDEFA MAILAKA
VetClinic dia natsangan’I Rtoa Carlina Herselman tamin’ny taona 2003. Tao Analamahintsy no toerana nahitana azy teo aloha.Ny taona 2016 kosa izy no nifindra teto Ampandrianomby rehefa nahavita trano vaovao lehibe natao manokana mba hifandraika @ filàn’ireo veterinera sy indrindra mba ho fanomezana fahafaham-po ny resaka fitsaboana ny biby.
Hatramin’izay ka hatram’izao dia miasa 24/7 ny VetClinic izay mikatsaka mandrakariva ny fanatsarana ny kalitao.
Noraisin’i Dr Delphine Behmann ny fitantanana ny VetClinic nanomboka ny taona 2010, izay miompana foana hatrany amin’ny fanatsarana ny kalitaom-pitantanana amin’ny alalan’ny « Certification ISO 9001-2015 » sy « Labellisation ENVOL » mba hifehezana sy hisoroana ireo toe-javatra mety hanimban’ny tontonlo iainana.
Misy ny toerana voatokana ho an’ireo saka, na ny eo amin’ny hefitrano fandraisana izany na ny ho an’ny saka miditra hopitaly ato amin’ny VetClinic.
Miisa 30 eo eo ny mpiasa mandrafitra ny VetClinic :
-Talean’ny Fampandrosoana, Mme Elodie Pascou misahana ny fanaraha-maso ireo sokajin’asa napetraka
- Ny Filohan’ny veterinera, Dr Marta Ralalanjanahary
- Veterinera maro
- Mpitsabo mpanampy maro izay tafiditra tao anatin’ny tetikasa momban’ny fiofanana ara-kalitao
- Mpampadro biby maro
- Ireo mpitantana isan-tsokajiny (mpiandraikitra ny fandraisana olona, fitantanam-bola, mpikirakira taratasy isan-karazany)
- Mpitondra fiara mpitatitra marary